Magacaabida Ra iisal wasaaraha oo la filaayo in lagu dhawaaqo saacadaha soo socda | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Magacaabida Ra iisal wasaaraha oo la filaayo in lagu dhawaaqo saacadaha soo...
Magacaabida Ra iisal wasaaraha oo la filaayo in lagu dhawaaqo saacadaha soo socda
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ku dhawaaqo Ra’isul Wasaaraha cusub ee badali doona Ra’isul Wasaarihii xilka laga tuuray.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga dareemayay mashquul badan oo ku aadan magacaabista Ra’isul Wasaaraha cusub, Madaxweyne Farmaajo ayaana la tashiyadii ugu dambeeyay la yeeshay la taliyaashiisa gaarka ah.
Sida aan wararka ku helnay Madaxweyne Farmaajo ayaa kala saaray siyaasiyiin badan oo hami uga jiray xilka Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya , waxaana siyaasiyiintaasi qaarkood loo muujiyay rajo xumo iyadoona loo sameeyay balan qaadyo kale.
Xilka Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa loo badinayaa in loo magacaabo siyaasi kasoo jeeda Beesha Abgaal, waxaana wararku sheegayaan in xubnaha hada miiskan saaran uu ku jiro Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi.
Madaxweyne Farmaajo ayaana la sheegay in shuruudo adag ku xiray shaqsiga uu u magacaabayo xilka Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya, waxaana jira siyaasiyiin badan oo damac uga jiray xilka Ra’isul Wasaaraha balse iska diiday shuruudaha lagu xiray.
Farmaajo ayaana doonaya hada in uu si deg deg ah u magacaabo Ra’isul Wasaare soo dhisa xukuumada ka shaqeysa doorashada dadban ee lagu heshiiyay in la qabto ,walow wali jiro shaki ku aadan in mudo kororsi dadban Madaxweynaha doonayo.
Waxii warar ah ee kusoo kordha magacaabista R/Wasaaraha kala soco wararkayaga dambe Insha Allah
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo la kulmay Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya
Next articleHoobiyaal lagu garaacay magaalada Baladweyne
Ciidamada Kenya oo Diyaariyey Qorsha Cusub ay kaga Hortageyaan weerarada Alshabaab